Emailium: Waxyaalaha Tusaalaha Emailka
Isniin, Disembar 13, 2010 Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Bill Dawson
Maanta waxay calaamadeeysaa beta-ka dadweynaha ee qalab cusub oo loogu talagalay suuq-geynta emaylka iyo kooxaha hal-abuurka leh, Emailium, xog ururin ololeyaal suuqgeyn email ah. Codsigan khadka tooska ah wuxuu diiwaan geliyaa emayllada dadweynaha, wuxuuna abaabulaa Warshadaha, Shirkadaha, ama astaamaha isticmaalaha lagu qeexay.
Sidee adeegani waxtar kuugu yeelan karaa? Aynu eegno dhowr xaaladood:
Kooxaha Hal-abuurka ah - Markii lagu riixo qaab cusub, ama lagu jahwareeriyo hal abuurka laga cabsado, kooxaha hal abuurka ah waxay raadsan karaan dhiirigelin ku jirta Emailium. Ma dooneysaa inaad cusboonaysiiso waraaqahaaga ciidaha? Sifee ururinta midab iyo taariikh kala duwan si aad u aragto waxa ay sameynayaan kuwa kale ee ka tirsan warshadahaaga.
Bixiyeyaasha Adeegga Emailka (ESPs) - Ma xiiseyneysaa waxa kale ee ESP ay ku sameyneyso fiidiyow, wadaag bulsho, ama qaabeynta emaylka? Emailium hadda waxay leedahay astaamo sumadeed dadweyne, kuwaas oo u oggolaanaya kala-soocidda ESP-yada waaweyn, markaa waad baari kartaa.
Calaamadaha - Isku dayida in la ogaado sida loogu daro barta "like" ee Facebook, ama khadadka maadooyinka ah ee laga heli karo jawaab fiican? Ku shaandhee ururinta shey ama khadka maaddada oo iska hubi emayllada la tartamaya.
Ganacsade - Maxay tartamayaashu samaynayaan saacadaha sii yaraanaya ee xilliga fasaxa? Adigu hadda waad garatay - shaandhaynta ururinta warshadaha iyo kala duwanaanshaha taariikhda fasaxa.
Booqo Emailium.com wixii macluumaad dheeri ah, iyo isdiiwaangalinta beta.
Waxaan Dib Ugu Laabaneynaa Kubadaha Isha
Sida Loogu Fasaxo Macaamiisha Inay Wadaan Ololahaaga Xiga
Jan 26, 2017 saacadu markay ahayd 3:03 PM
Nabadeey Bill, waxaan u maleynayey inay xiiso laheyd in la ogaado in Emailium uu hada yahay adeeg bilaash ah oo suuq geyn ku leh magaca Emailka Hal Abuurka: https://www.freshaddress.com/eca/home.cfm